Breaking News ‘पीपीई माग्दा डाक्टर र स्टाफ नर्स जागिरबाट निकालियौँ’ यस्तो गर्नु सहि हो कि गलत आफ्नो धारणा राख्नुहोस!
दाङ–डाक्टर अृमता श्रेष्ठ भदौ देखी चैत सम्म नियमले पाउनुपर्ने विदा समेत नलिएर नागरिकको उ,पचारमा खटिइ राखिन्।
को,रोना भा,इरसको त्रासका विचमा पनि निकै मेहनतका साथ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेकी थिइन्। तर, उनै मेहनती डाक्टरलाई प्रतिष्ठानले बैशाख १ गते काममा नआउनु भन्यो। अर्की स्टाफ नर्स प्रकृति डिसीलाई पनि प्रतिष्ठानले जागिरबाट निकालिदिएको छ।
प्रतिष्ठानकी उपकुलपती संगिता भण्डारीले उनलाई अबदेखि काममा नआउनू भनेर डाक्टर र नर्सले गुनासो गरेकी छिन्। तर प्रतिष्ठानले भने बाहिर सन्तोषजनक काम नगरेकाले जागिरबाट निकालेको बताउँदै आएकी छिन्। प्रतिष्ठानले ती दुवै कर्मचारी ( डाक्टर अमृता र नर्स प्रकृति)ले आफूहरुलाई ह,टाउनुको कारण भने अर्कै रहेको बयान दिएकी छन्।
डाक्टर अमृता श्रेष्ठले दिएको बयान यस्तो छ
कुरा यसरी सुरू भयो..
चैत महिनाको अनतिम तिर थीयो एउटा फेसबुक पेज ‘डक्टर स्टोरी नेपाल’मा मैले खीचेको तसबीरहरू अपलोड भएको रहेछ। जुन तसबिरहरू एएभ् लिएर थियो। फोटो सहित केही लेखीएकोनी थियो। जुन तपाईहरू तेस पेजमा गई हेर्न सक्नु हुन्छ।
मलाई पेजमा लेखेको कुराहरू राम्रै लागेर आफूले सेएर गरे र ईमरजेन्सिका इस्टाफहरूलाई पनी सेएर गर्नु भनेर मेसेज गरे। यस कुराले प्रसासनमा हङगामा नै भएछ र यो कुरा म्याम सम्म पुगेछ ‘अरू के चाइयोर प्रसासनको मान्छेहरू लाई हामी त एउटा त्यहाको कामदार त भयौ।’
शेयर गरेको अर्को दिन सबै इमरजेन्सिका इस्टाफहरूलाई एक–एक गरि बोलाइयो र सोधपुछ गरियो। प्रश्न गरियो ‘कसले फोटो खीचेको भनेर ?’ नभए जागिर जान सक्छ नि भनियो।
आफ्नो जागिर कसलाई प्यारो हुदैन र? जागिर बाट हटाइने डरले गर्दा नै सबै जनाले मेरो नाम लिनु भयो होला र मैले नै शेयर गर्नु भनेर नि भन्नु भयो होला।
किन भन्नु भयो मेरो नाम सबैले भनेर मलाई दुः,ख छैन। त्यसपछि मलाई बोलाउनु भयो र मलाई पनि प्रश्न गरियो ‘तिमीले फोटो खिचेको, तिमीले सेयर गर्न लगायौ, तिमीले ‘डक्टर स्टोरी नेपाल’मा फोटोहरू दियौ, एएभ् को अर्थ थाहछ तिमीलाई ?, एएभ् कहाँ लगाईन्छ ?, एएभ् को अर्थ नै थाहा छैन भनेर नि भन्नुभयो’।
तिमीलाई माथिबाट नै ‘टर्मिनेट’ (निकाल्ने) भनेर आदेस आकोछ भन्नुभयो। र मैले पनि शेयर गरेको कारणले निकालनुहुन्छ भने ठीकैछ भने। हुन त म क,रारमा काम गरिरको थिए र मेरो अवधि चैतसम्म थियो।अहिले चाहि काम सनतोषजनक नभइ म्याद नथपि निस्कासन गरेको र वैशाखदेखि नआऊनु भनि मेडियामा छाप्न लगाईएको छ जुन गलत हो।
स्टाफ नर्स प्रकृति डिसीको बयान
२०७५ पुसदेखि प्रतिष्ठानमा काम गर्दै आएको हुँ। यस अघि म नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा लगभग दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेको हो। चैत ७ र ८ गते तिर को,रोना शं,कास्पद बि,रामी प्रतिष्ठानको मेडिकल वार्डमा राखेको थियो। म पनि मेडिकल वार्डमानै काम गरिरहेको थिएँ‍।
त्यसैले पीपीइ चाहियो भनेर हामीले डाक्टर बसन्त त्यहाँको डिन संग कुरा राखेका थियौं डाक्टर बसन्तले पिपिइ आएको छ। तर, एकदम शिरियस भएपछी मात्रै निकाल्ने भन्नु भएको थियो।
यदि काम गर्न सकिदैन भने का,रण दिएर जान पनि भन्नु भएको थियो। त्यसपछि मैले मेरो फेसवुक स्टोरी २४ घण्टाको राखे। त्यसमा डाक्टर नर्सलाई पीपीइबिना कोरोना विरामी हेर्न जान भनेको आर्मीलाई ह,तियारबिना यु,द्ध जानु भनेको हो र।
यस्तै लाजलाग्दो हातल प्रशासनको छ। भनेर फेसवुकको स्टोरीमा हालेको थिएँ। र मलाई प्रशासनमा बोलाइ सामाजिक सञ्जालमा जजमेन्ट तिम्रो भनेर भनियो। बैशाख १ गते देखि हामीले तिम्रो करार सेवा थप्दैनौं भनेर एउटा टर्मिनेन्ट लेटर थमाएर पठाउनुभयो।